IFirefox iphumelele iMfazwe yeSikhangeli | Martech Zone
IFirefox iphumelele iMfazwe yeSikhangeli
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 8, 2006 NgoMvulo, nge-17 kaDisemba ngo-2018 Douglas Karr
Ukujonga isabelo sentengiso sangoku kubakhangeli kunika ukuqonda ukuba ngubani ophumeleleyo nophulukana neemfazwe. IFirefox iyaqhubeka nokwakha umfutho, iSafari inyukela phezulu, kwaye i-Intanethi Explorer ilahleka emhlabeni. Ndingathanda ukunika izimvo kwezi zintathu 'ngeethiyori zam' zento eyenzekayo.
Emva kokutshabalalisa iNetscape Navigator, IE ngokwenene yaba ngumgangatho wegolide kumnatha. Isikhangeli sasilula, sisebenza, kwaye sasilayishwe ngaphambili ngazo zonke iiMveliso zikaMicrosoft. Kananjalo, i-ActiveX yayinombala omfutshane, ofuna uninzi lwabantu lusebenzise i-IE. Kutheni usebenzisa izikhangeli ezininzi xa enye yazo ixhasa yonke imigangatho eyahlukeneyo kwiwebhu? Mna ngokwam ndingumsebenzisi we-IE ngohlobo 6.
Nge-Intanethi Explorer 7, uyilo lwewebhu lwehlabathi lwalubambe umoya wokuphefumla isikhangeli abanokuyilungiselela eya kuthi isabele ngokungqinelana netekhnoloji yakutshanje yeeSpeed ​​Style Sheets. Ngelishwa, IE 7 iyaphoxeka. Ukuphonononga i-IE Blog, bekungekho nakwi-radar de isikhangeli sibe yi-beta kunye nesikhalo sosizi esivela kumzi-mveliso woyilo lwewebhu. Olunye uphuhliso lomzuzu wokugqibela luye lwalungisa eminye imiba… kodwa alwanelanga ukwenza uyilo lwehlabathi ukuba lonwabe. Khumbula - uninzi kwihlabathi loyilo lisebenza kwiiMacs… zinqongophele kwi-Internet Explorer. Kodwa, ngelishwa labo, abathengi babo basebenzisa i-Intanethi Explorer.
Kodwa yeha, nge-Internet Explorer 7, iMicrosoft itshintshe ngokupheleleyo unxibelelwano phakathi komsebenzisi kunye nomthengi. Kwi-technophile enjengam, ezinye zotshintsho zazipholile. Kodwa kumsebenzisi we-atypical… ukungakwazi ukuhamba ngokulula ngaphezulu kwescreen kwakudida kwaye kuyabhidisa. Baqala ukujonga ukuba yintoni enye ephandle. IFirefox.
Umfanekiso weskrini http://marketshare.hitslink.com/
Ukulingisa ukusebenza kwebrawuza ngokubanzi ebuyela kwiNavigator, iFirefox yaba sisisombululo esisindayo kwi-Internet Explorer. Kwabavukeli be-Microsoft anarchists, iFirefox yaba ngumnqweno kwaye yaqala ukuboleka imarike.
Ukusebenza okongeziweyo njengeeplagi ezibalaseleyo zokudityaniswa kobunye ubuchwephesha kuye kwaba yinto emnandi kwiFirefox. Baqhubeka nokutsala abaphuhlisi kunye nabayili bewebhu ngokufanayo… ukusukela oko iFirefox ineengxaki zokulungisa okungalunganga, i-Cascading Style Sheet, kunye nee-plug-ins zomntu wesithathu ezenza uphuhliso kunye nokudityaniswa kube lula ngakumbi.
Imarike iyatshintsha ngokunjalo. I-ActiveX iphela ifile kwaye iAjax inyuka, ibolekise kwizikhangeli ezinjengeFirefox. Ngokuqinisekileyo akukho sizathu sokusebenzisa i-Intanethi Explorer ngazo zonke ezi ntsuku. Ukuba i-IE ingayenza, iFirefox inokuyenza ngcono. Uhlaziyo lweWindows olusetyenziselwa ukufuna isikhangeli, kodwa ngoku zinokulayishwa kwaye zifakwe ngaphandle kwayo.
IFirefox ayikushiyanga ukusetyenziswa kwayo kunye nolwakhiwo olufana neMicrosoft nge-IE 7, eyenza kube lula kubasebenzisi ukuba batshintshele kwiFirefox ukusuka kwi-IE 6 ngokulula nangokulula. Yinto entle, ekhawulezayo, kwaye ingenamthungo.
Ngokutyhala kukaMac kutshanje kwimakethi yasekhaya ye-PC… ayisiyiyo i-PC yeeDyunivesithi, yaBasetyhini naBantwana kwakhona. IMac yam entsha iqhuba i-OSX, Windows XP (kunye nokufana) kwaye ndinokuqhuba sonke isikhangeli kwiplanethi ukuyila nokuphuhlisa. NgeSafari ilayishwe kwangaphambili, ngaphandle kwamathandabuzo ifumana isabelo kuba iiMacs zifumana isabelo. Uqikelelo lwam kukuba iSafari izakuphulukana neFirefox, nangona.
IMicrosoft kufuneka izive isoyikiswa- kodwa eneneni sisiphoso sabo. Baye basusa nasiphi na isidingo sesikhangeli sabo, abasebenzisi ababakhethileyo, abayili abazahluleyo, ababhekisi phambili, KANYE ngoku bavumela abanye ukuba babathathe baye kwezinye ii-verticals (mobile).
I-Intanethi Explorer iyazitshabalalisa. Andiqinisekanga ukuba kugxilwe phi kumthengi konke konke.
Emva kokuba ukhuphele kwaye ufake iFirefox, yiya kwifayile ye- Faka-ons icandelo kwaye ukhuphele kumxholo wentliziyo yakho. Nabani na owenza oku, ndingathanda ukuba usebenzise isikhangeli iiveki ezimbini emva koko ubuyele kwindawo yam kwaye undazise ukuba ucinga ntoni.
Ndingumfo kaMicrosoft ngaphezulu kweshumi ngoku, ngenxa yoko andinguye ibasher. Nangona kunjalo, ndaziva ndinyanzelekile ukuba ndingene kwaye ndixoxe ngobuchwephesha beqela le-IE elingene kulo.
tags: imfazwe yomkhangeliiipheqululifirefoxieUmhloli we-intanethi 7microsoftumqhubi wenetscape
Ukukhula ngokukhawuleza kwebhlog kwiPlanethi?
Ndiyi-SOB (kwaye ndiyazingca ngayo)!
Ngomhla wama-8 ku-Disemba 2006 ngo-11: 36 PM
Ndiyavuma ukuba akusekho sizathu sokusebenzisa i-IE kwakhona, kodwa ngelishwa ilizwe lisagcwele ii-novices ze-intanethi ezingazi ngcono. Ndiyathemba ukuba ilizwi lomlomo liya kutshintsha ekugqibeleni.
Ngomhla wama-9 ku-Disemba 2006 ngo-3: 54 AM
Ndingumsebenzisi owonwabileyo weFirefox iminyaka eliqela ngoku. Ndiziva ndithandana nayo ngenxa yolwandiso olungenakubalwa, kunye nokhuseleko olwandileyo kwi-Internet Explorer.
Xa ndifumene iMacBook Pro yam ebutsheni balo nyaka, ndizamile iSafari iiveki ezimbalwa, kodwa ndaye ndagqibela ngokubuyela kwiFirefox. Izinketho zokwenza ngokwezifiso ziphantse zingenamkhawulo. Kunyaka ophelileyo, ndiguqule ngempumelelo usapho lwam lonke (kunye nabahlobo bam abaninzi) kwiFirefox.
Ngomhla wama-9 ku-Disemba 2006 ngo-11: 27 AM
UPaul wayengafuni ukundiphoxa-kodwa uya kuqaphela ukuba ndiyilungisile i-phobias to philes! Ukubamba kakuhle kuPaul owayelungile ngokwaneleyo ukuba andithumelele i-imeyile! Abantu abandaziyo bayazi ukuba ndiyingcali yokubamba isiNgesi. Ngokwenene ngumhlobo oya kukuhlangula kwiintloni!
UPaul unebhlog enkulu apha:
Ngomhla wama-17 ku-Disemba 2006 ngo-1: 17 AM
Ndivuma ngokupheleleyo ukuba iFirefox iza kubetha IE 7 okanye ukuya phambili….
Isizathu sokubetha kukuba iiplagi zeFirefox kunye nezongezo zeFirefox.
Ndicinga ukuba ngoJulayi 2007, IE izakuma ngama-35%
Ngomhla wama-17 ku-Disemba 2006 ngo-2: 21 AM
Assalamu, Fazal. Ndiyavumelana nawe! NgeFirefox 3 Alpha esele iphumile, iMozilla ivutha umkhondo uMicrosoft angakhuphisani nawo.
Feb 3, 2007 ngo-6: 46 PM
Ndayifaka i-IE7 kwideskithophu yekhompyuter kwaye yasebenza kakuhle emva kokuba ndidibene nayo kodwa xa ndayifaka kwiLaptop yam, yamisa yonke into. Ukuba khange ndifumanise ukuba le nkqubo (ngaphandle kwezongezo) ibibandakanyiwe kunye neenkqubo zam eziphantsi kwezixhobo andizokwazi ukufikelela kuzo kwaphela.
Ndixhalabile, ndiya ebhankini kwi-Intanethi kwaye andiqinisekanga ukuba ndingasebenzisa iFoxfire. Ndingathanda ukuzama kodwa ndifuna ulwazi oluthe kratya.
Feb 3, 2007 ngo-7: 39 PM
Iibhanki zale mihla ze-intanethi ziyangqinelana. Inkxalabo iya kuba yeyokuxhasa i-SSL (iZiseko eziKhuselekileyo zoLuhlu), ezo ziindlela ezifihliweyo zokunxibelelana kwedatha phakathi kwesikhangeli sakho kunye neeseva zebhanki ezikwi-intanethi. IFirefox ixhasa ngokupheleleyo i-SSL kanye njengoko IE isenza ngaphandle kwemida. Eyona ndlela icacileyo yokwazi ukuba usebenzisa i-SSL kukuba uku-https: // idilesi endaweni ye http://. Nangona kunjalo, zombini i-IE kunye neFirefox (kunye neOpera kunye neSafari) zikwanazo izikhombisi ezibonakalayo kunye neenkqubo zokuqinisekisa ukuba isatifikethi se-SSL kunye nokubethela kusebenza kwaye kusebenza ngokufanelekileyo.
Ngamanye amagama-akufuneki ube nayiphi na imiba. Ewe akukhathazi ukujonga iphepha lebhanki lakho elithi "Inkxaso" ukubona ukuba bayayixhasa na iFirefox. Uya kuyifumana ngokuqinisekileyo isikhangeli esihle-ngokukhawuleza okukhulu ngezinto ezininzi ezilungileyo.
Enkosi ngokundwendwela… nangokunika izimvo zakho!
Novemba 3, 2007 ngo-5: 50 PM
IFirefox iwele i400-yezigidi zokukhuphela uphawu kwaye, ngethemba, iya kuqhubeka. Ezinye iindlela zihlala ziyindlela yenkqubela phambili.
Kodwa ukuphumelela kwimfazwe yesikhangeli… kusekutsha kwangoko.
Novemba 3, 2007 ngo-11: 24 PM
Ndisebenzise IE kangangeminyaka, ndiyaqhubeka nokuyisebenzisa kwaye ngokungathandabuzekiyo andithathelwa ngqalelo kwinqanaba lomsebenzisi leFirefox. Ndiyarhana ukuba uninzi lwabasebenzisi abanokukhathalela kancinci. Ndiyavuma nawe, nangona kunjalo, ukuba utshintsho kwi-IE 7 belunokudideka.
UDaryn St. Pierre
Novemba 21, 2007 ngo-8: 11 PM
Ndivumelana ne-thoughs yakho kwi-IE7 kwaye ndiyilo lewebhu, ndiye ndaphoxwa ngezinto ezimbalwa xa kukhutshwa i-IE7. Ngoku ndikwinkqubo yokwakha iwebhusayithi entsha kwaye ndifumene imicimbi ethile nge-divs kodwa akukho nto iphambili (ukuza kuthi ga ngoku). Ndisebenzise i-IE7 kancinci kodwa bendilindele ukutsiba okukhulu ukusuka ku-6.0 ngokubhekisele kwinkxaso yeCSS, njl.
Ndingumsebenzisi weFirefox iminyaka kwaye ndibambe abasebenzisi abambalwa apha endleleni. Ndicinga ukuba eyona nto inditsala kakhulu, kunye nabanye abasebenzisi be-FF, yinto yokuba ingoyilo lwewebhu / umphuhlisi olunge kakhulu kunye nokuqhutywa ngokwezifiso. Ndicinga ukuba i-IE izakuqhubeka nokulinganisa kwaye ndicinga ukuba iMicrosoft izakufuna ummangaliso okwangoku. Amandla afunyenwe yiFirefox kunye neSafari ayifumana kancinci, ikhupha i-IE kunye nenyani yokuba bahlala besilela ekuveleni imigangatho yewebhu ehambelana nesikhangeli, ayibancedi nakancinci.
Abayili bewebhu banokubanika kuphela amathuba amaninzi kangaka
Nov 22, 2007 kwi-7: 44 AM
La magqabantshintshi ayalahlekisa. Ngokwezibalo zamva nje endizibonileyo isabelo se-IE siye “sehla” ukusuka kwi-85.88% isabelo sehlabathi se-Q4 2005 ukuya kwi-78.5% ye-Q3 2007. Lonto leyo yehla nge-7.3% kwisithuba seminyaka emibini.
Okwangoku, iFirefox isondeza ukusuka kwi-9% ukuya kwi-14.6% kwangaxeshanye. Olu lukonyuka lwe-5.6% kwisithuba seminyaka emibini.
I-Safari isuke kwi-3.1% yaya kwi-4.77% -onyuko olungafanelekanga ukuba luthethwe ngalo.
Ewe iFirefox iyafumana kwi-IE, kodwa i-IE isenokubonakala ngaphezulu kwe-5x yabasebenzisi.
Ezi zibalo zivela kwiWikipedia "Ukusetyenziswa_share_of_web_browsers" kwaye ngokuqinisekileyo zinokuthatha icala ngenye indlela.
Kuyabonakala ukuba uninzi lwehlabathi alukhathalelanga ukuba bacinga ntoni abayili bewebhu. Ndingacinga ukuba kufanele ukuba siyilele abantu kunokuba sizikhathaze ngokhetho lwethu.
Nov 22, 2007 kwi-8: 48 AM
Enkosi Rick! Ngaba sinokubuza ukuba iphi imithombo yakho ngokubhekisele kwizibalo?
Ndivumelana nawe, kodwa kukho ibali elilumkisayo ngokungakhathaleli ukuba bacinga ntoni abaqulunqi bewebhu… kwaye loo nto uyilo lwewebhu luya kuqhubeka luyinto ebiza kakhulu xa kufuneka uyile ngaphandle kwemigangatho ukukholisa isabelo sentengiso esingama-85.88%!
Novemba 22, 2007 ngo-2: 25 PM
Ihlala iphambili kuyilo lwabantu kodwa inyani yokuba iMicrosoft ayilandeli wonke umntu, iyenza nzima imisebenzi yethu. Ndizifumana ngamanye amaxesha kufuneka ndibhale amashiti ahluke ngokupheleleyo e-IE ndedwa kwaye kudla ixesha. Oko akuthethi nto kumsebenzisi ophakathi. Kuyacaphukisa xa isikhangeli esikhokelela kwipakethi yeyona migangatho yewebhu incinci ihambelana.
Novemba 22, 2007 ngo-3: 44 PM
Andiphikisani nezinto ezikuxhalabisayo kwimbono yoyilo, nangona andiqinisekanga ukuba kutheni unomdla wokuba ungabiza abantu ngakumbi ngeenkonzo zakho. Ngaba abantu abakulungelanga ukuyihlawulela? Ngokucacileyo le yimicimbi yobuchwephesha ekufuneka yoyisiwe.
Ndithatha nje umba ngengcebiso yokuba kukho intshukumo enkulu kude ne-IE. Izibalo (ngokokwazi kwam) azixhasi ibango, ngaphandle kwabo bonke abayili kunye nee-SEOs ezenza ibango ngenye indlela kwaye ngokungapheliyo zikhuthaza i-FF. Nokuba kufanelekile ukuba bayayinyusa yenye into, kwaye unokuba uchanekile malunga noku.
Njengoko benditshilo kwingcaciso yam, umthombo wam wawuyiWikipedia- ayingowona mthombo wesandi onomtsalane, kodwa amanani akhangeleka ecikizekile…
Novemba 23, 2007 ngo-5: 42 PM
Ngokuqinisekileyo uchanekile kwimiba yomibini, Rick. Ndingaphikisana ukuba i-IE iyaqhubeka ukuba nesabelo esikhulu kwimakethi kuba iyinxalenye yeNkqubo yokuSebenza, nangona. Ukuba bekunokukhutshelwa ukhuphelo kunye nokukhetha okufanelekileyo, ndiyakholelwa ngokwenene ukuba i-FF iyakube ikhaba iimpundu zabo.
Ngomhla wama-21 ku-Disemba 2007 ngo-6: 51 AM
Bendihlala ndingumcwangcisi kunye nomphuhlisi wewebhu. Ngo-2003 ndafumana ingozi ndaza ndayibetha intloko. Ukubhala ikhowudi ngoku kuninzi kakhulu kum, ke ngoku ndiyi joe eqhelekileyo..lol
Ngapha koko, bendisebenzisa iLinux ukusukela ngo-1996 (khumbula iCaldera-xa kwakufuneka uyivumele ukuba izikhuphele yona kangangeentsuku ezi-2..lol). Iibrawuza zewebhu azizange zikulungele ngaphambi kweFirefox. Xa iFirefox yaphuma, yayiyeyona nto inkulu kubasebenzisi beLinux (iThunderbird nayo). Kuba iMicrocrap ihlala ijija abasebenzisi beLinux, bazidubula ngenyawo. Ndikhumbula iFirefox / iThunderbird iba yeyona nto ibalulekileyo kwi-intanethi yeLinux ngokulula. Ayisiyonto inkulu, kwaye unokubeka naluphi na ulwandiso oluthandayo (adblockl!). Ke, ilula okanye inzima njengoko uyenza. Akukho ndawo zingafunekiyo konke konke. Iithebhu zipholile kwaye zincinci.
Ngoku ndisebenzisa iWindows xp, kuba 'abanye' apha ngelishwa benze imeko yokuthenga le pc, ukuze 'bayisebenzise (idiots). Kungenxa yoko le nto ndikhuphele ngoko nangoko i-firefox / thunderbird. Xa ndisebenzisa iWindows kwakhona, NDANDIYITHANDA ingcaciso ye-Outlook, kwaye ndisafuna ukubuyela kwiFirefox, kunye nezolulo zam (ndade ndagcina zonke iifayile ze-config kunye neebhukumaki zam ezivela kwi-Linux, ndazingenisa kwi-Winxp!).
Kutshanje, i-pc yam yaqala kwakhona ngobusuku bonke, kwaye bendinayo le ALIEN ijonge ibar yesixhobo esityebileyo enee-TUGE ezingapheliyo. Isixhobo se-friggin bar sithatha i-1/5 yesikrini esilahlwayo! NDANDIKUTHANDA! Wonke umntu olapha naye wayeyithiyile. Liphi iqhosha STOP? Akukho mntu ufuna ukuba isikhangeli sithathe indawo engaka! Iithebhu ezinkulu, nokuba kukho iphepha eli-1 kuphela !!
Kuthekani ngephepha lewebhu? Awunakho nokuyibona kuba konke okubonayo kukuKhangela! Iphazamisa kakhulu, kangangokuba andinakukwazi ukuyimela. IMicrosoft ngokufanelekileyo ayinandawo yokukhalaza. Yeyiphi imfumba yejunk eneengubo. Isisombululo sam sesikrini sisetelwe kwi-1152 × 864 kwaye andinakucinga ukuba ingabonakala njani kwi-800 × 6000! Ngaba ndingakwazi ukubona iphepha?
Ke izithupha ezi-2 ezantsi ze-IE7! Wonke umntu uyayithiya, kwaye kukufa kwe-IE. Kuyahlekisa, banesikhangeli esilungileyo, kodwa ngokukopa iFirefox, ngoku banengxubevange. Ndiyathetha .. yintoni yonke into enqabileyo kwiibar zesixhobo, kwaye aphi amanye amaqhosha ??
Ke, enkosi Microsoft, sele uzenzile ekugqibeleni! Ngoku ndichitha ixesha elininzi ndicacisela abanye abafowunayo kwaye babuze ukuba kutheni isikhangeli sabo ngequbuliso sibi kwaye sinzima, kwaye ndibancede bayikhuphe i-IE7! Akukho mntu uyifunayo!
Meyi 28, 2008 kwi-12: 30 PM
Ndicinga ilungelo lakho Mnu.Blog man, kudala ndisebenzisa iFirefox kwikhompyuter yam ngaphezulu konyaka kwaye khange ndijonge emva ukusukela oko. Nabani na owaziyo nantoni na malunga nesoftware yekhompyuter unokukuxelela ukuba iFirefox sisikhangeli esiphakamileyo izandla ezantsi. Andizange ndizame isoftware yeThunderbird kuba i-Outlook 2007 kwiOfisi yeShishini intle kakhulu kwaye isebenza kakuhle kum. Kutheni uyitshintsha ukuba ayophukanga. IE 6-7 yaphukile nangona, ngalo naliphi na ixesha ndisebenza kubahlobo, usapho, umhlobo we-intanethi, okanye umntu nje ofuna uncedo ndihlala ndiyifaka okanye ndibaxelele ukuba bafumane iFirefox. Ayisiyongqondo kwincwadi yam.
Ndifuna nje ukwazi ukuba kutheni uMicrosoft ecinga ukuba bekhupha isikhangeli esigqwesileyo, ngaba bakulungele ngokupheleleyo ukubangqongileyo? Ngaba kungenxa yokuba bacinga ukuba isoftware yabo iyamangalisa kangangokuba abantu bayayisebenzisa nje? Okanye kungenxa yokuba uMicrosoft wayefumana amawaka ezigidi ngosuku kwaye bathi "ulibale umthengi asikhathali nokuba bacinga ntoni" ngenxa yoko banyanzela isikhangeli esingenaxabiso nesingaphenduliyo kwintengiso. Idiots! Ayifani ndinekhompyuter ye-junky, IE isebenza ngokungakhathali kuyo nayiphi na inkqubo. Kufuneka ibekho kwikhowudi yesoftware okanye enye into.
Ukuzonwabisa nje ndiyilayishe namhlanje ukuze ndibone ukuba iphuculwe ngummangaliso othile (hayi) usafunxa. Ndaye ndathi kum "Kutheni, kutheni ibaleka ngoluhlobo" ndiye ndakhangela (Kutheni i-Internet Explorer ilayisha kancinci) kwaye ndisebenzise ukukhangela kwiphepha lasekhaya kuGoogle kwiFirefox. Ndigqibele apha emva kokulandela ikhonkco kwenye indawo enenqaku elinje kule. Ndilandelwe ecaleni ngenxa yoko andikabi nayo impendulo okwangoku. Yiya kwiFirefox! Ukukhaba uBill Gates kumantongomane kuthi sonke ngexesha elinye umntu ngamnye ngokuqhubekayo. Ndiza kuqaphela umzobo omnye ubuyela kwi-FF nangona kunjalo, kubi malunga nokusetyenziswa kwememori. Ingcinga echanekileyo, ngokukhawuleza, ngokukhawuleza kwaye ukuqala ngokukhawuleza kuya kulungisa loo nto.